Kiiska IKRAAN TAHLIIL: Shan su’aal oo jawaab uga baahan madaxda hay’adda NISA | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Warkii Kiiska IKRAAN TAHLIIL: Shan su’aal oo jawaab uga baahan madaxda hay’adda NISA
Kiiska IKRAAN TAHLIIL: Shan su’aal oo jawaab uga baahan madaxda hay’adda NISA
Maqnaanshaha 70-ka maalmood socday iyo geerida ka danbeysay ee Ikraan Tahliil Faarax oo ay shaacisay Hay’addii ay u shaqeyneysay ee Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA, waxay kicisay mowjado naxdin, tacsi iyo diidmo isugu jira, waxaana ka dhashay su’aalo badan oo kiiskan ku hareereysan.
Kiiska Ikraan wuxuu mar kale bannaanka keenay sida Hay’adii Nabadsugidda Qaranka u noqotay afartii sano ee xukunka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mid isu bedeshay Hay’ad lumisay sumcadeedii, horena loo siyaasadeeyay, markii ay faraha la gashay arrimo fadeexado badan usoo jiiday.
1- Sidee loo afduubay Ikraan?
Maqnaanshaha Ikraan Tahliil wuxuu soo bilowday markii la waayey habeenkii 26-ka June 2021, sida ay sheegtay hooyadeed. Waxaa soo wacay mid ka mida taliyeyaasha NISA, gaari u soo diray, kadiba ay ka raacday gurigii ay deganeyd oo ku yaalla meel tallaabooyin u jirta Xarunta weyn ee Hay’adda NISA, degmada Shibis ee magaalada Muqdisho.
Sidee afduubka uga dhacay NISA xarunteeda? waa su’aasha aan laga jawaabin ee NISA laga sugayo inay caddeyn ka bixiso, waana arrinta iyadoo aan laga jawaabin, lagu qanci karin wax kasta oo ay kiiskan ka sheegto Hay’adda NISA.
2- Yaa Afduubtay Ikraan?
3- Yaa gacan ku lug lahaa afduubka Ikraan?
Su’aashan waxay jawaab u noqoneysaa tuhunka marar badan lasoo celceliyay ee ah inay wada shaqeeyaan ama isku milmeen hay’adda NISA iyo Al-Shabaab, tuhunkaas oo si meesha looga saaro u baahan si dhab ah kiiskan loo baaro, lagana dhaafo siyaasadeynta mucaaradka iyo daboolista madaxda NISA.
4- Sidee lagu xaqiijiyey dilka Ikraan?
Iyadoo sidaasi jirto ayaa warka kaliya ee ay NISA soo marisay Warbaahinta dowladda waxay noqotaya inay Al-Shabaab u gacan gashay, ayna dilden…!!!. Alshabaab ayaa iska fogeysay dilka Ikraan, kuna tilmaantay masabid.
5- Maxaa kiiska Ikraan looga gaabiyay oo loo daboolay?
Agaasimaha NISA iyo madaxda Hay’adda, marka lagu daro madaxweynaha xilka ka dhammaaday ee Villa Somalia fadhiya haddii aan kasoo qaadno inaysan wax lug ah ku lahayn kiiskan oo saraakiil kale ka dambeeyeen waxay kaliya oo ay ku badbaadi karaan inay tallaabo cad qaataan oo kiiskan cadaaladda mariyaan, ciddii ku lug lahaydna soo bandhigaan.
Previous articleIibka Funaanada Cristiano Ronaldo ee ”Ronaldo 7” oo durba dhigtay Rikoor 12 saac oo kaliya
Next articleCristiano Ronaldo oo farriin gaar ah u diray Bruno Fernandes ka dib markii uu ku biiray Man United